Pedzisa mabasa eVirginia Woolf mahara kurodha pasi | Zvazvino Zvinyorwa
Pedzisa mabasa eVirginia Woolf mahara kurodha pasi
Sezvaunenge uchitoziva nezvazvino, mu Zvazvino Zvinyorwa tinoifarira zvikuru munyori Virginia WoolfUchapupu hweizvi ndizvo zvinyorwa zviviri zvekupedzisira zvatakanyora uye zvaunogona kuverenga mune zvinotevera zvinongedzo kana usati watoita saizvozvo:
"Kuzviuraya kwakanyorwa naVirginia Woolf".
"Virginia Wolf mukuru angadai asvitsa makore zana nemakumi matatu nemana nhasi".
Kana iwe zvakare uchidawo uyu munyori uye kunyanya mabasa ake, haugone kurega kuverenga chinyorwa ichi, nekuti mariri tinokupa iwe mukana wekutora zvimwe pedzisa mabasa aVirginia Woolf mahara kurodha pasi zvachose. Heano maitiro.
Public domain inoshanda
Sekutaura kwemusoro weichi chikamu, anotevera mabasa atinopa ekurodha pasi ave mabasa eruzhinji, saka avo free download es zviri pamutemo zvachose uye zvinotenderwa.
Tinogona kuita izvi kurodha pasi nekutenda kune iyo Alejandría Dhijitari portal, iyo, sezvavanoratidzira muprofita yavo, inzvimbo yekuparadzira pachena kwemazita eruzhinji zvemadhijitari paInternet.
Iwo mabasa anopiwa anotevera (pasina kubaya pane yega yega uchaenda wakananga kunongedzo yayo muPDF fomati, iyo iwe yaunogona kuvhura kana kusevha pakuverenga kwako kunotevera):
Imba inoshamiswa nedzimwe nyaya
Orlando (Chirungu - Spanish). Iri bhuku raive nesimba raGabriel García Márquez sezvakaratidzwa neimwe iyi chinyorwa.
Imba yangu ndega
Kubva Zvazvino Zvinyorwa, isu tichava vakanyatsoteerera kuti tikwanise kukupa iwe zvinyorwa senge izvi munguva pfupi kuitira kuti iwe ugone kunakidzwa netsika yemahara iyo isu tese isu yatinofanira kuwana. Kana iwe uchida idzi mhando dzezvinyorwa isu tinoda kuziva saka ese mazano uye makomendi anogamuchirwa.
Ndeupi mumwe munyori wekare waungade kuti unakirwe nekuverenga mahara zvachose?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Pedzisa mabasa eVirginia Woolf mahara kurodha pasi
Jose Faiad akadaro
Ndinoda kugamuchira mabhuku eMorris West
Pindura kuna jose faiad
Saiti yakanaka kwazvo
franklin warrior akadaro
Zvinoshamisa saiti, muchidimbu, zvese zvine chekuita nemikana yekuwana basa, chipo chakakosha uye chisingaenzanisike. Ndinokukorokotedza nekukwanisa kwako kushanda kushambadza honorem.
Pindura kuna Franklin Guerrero
Zvinongedzo zvemabhuku zvakaputswa. Zvinogona kukosheswa kuzviisa zvakare.
Pindura kuna Paz
Handizive kana vakatopa musoro wenyaya uye vakaburitsa mabasa avo, asi ndinoda kuziva zvakawanda nezve hupenyu nebasa raOscar Wilde
Pindura kuna minna
Izvo zvinongedzo zvakavharwa Ini ndinonyatsoda kuverenga ako mabasa iwe unogona kuamisa iwo zvakare, ndapota.
Hapana chinongedzo chinoshanda.
Pindura kuna Lecty
Tsika dzakashamisa uye dzinoda kuziva dzevanyori vane mukurumbira
Mabhuku makumi maviri nemana ane simba muhupenyu hwaGabriel García Márquez